maanka ka danbeeya abuuridda of kasta kitaabkii ay bixiyaan waxaa website-ka Clickfunnels Sidoo kale qofka weyn ee hal abuur on shirkadda.
Russell Brunson Software Secrets waa mid ka mid ah qurbaanno ugu awooda shirkadda in ay magaca ka sameeyey by labeeyo qaar ka mid ah aqoonta ugu fiican ee aad ka heli karto oo ku saabsan samaynta ganacsigaaga web-ku saleysan shaqsi ah la lahayn waayo-aragnimo hore.
Nin ayaa uu wax u samayn muddo ka badan 12 sano haatan iyo mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee uu sameeyo waa qurbaannadiinna xajiya cusub iyo updates la horumarka farsamada in ay xaqiijin doonaan waddada guusha in inta badan macaamiisha uu.
Waxaa jira tiro ka mid ah xeelado ganacsi ku qeexan ruuxaanta kale webinars iyo buugaagta ka sokow.
Haddii aad raadineyso warbixin ku saabsan shirkadaha software-dhaqameedka aad mar walba dhegaysan kartaa ka podcast qarsoon software abuuray by-hawlgalayaasha Russell Brunson 'Garret animated, Scotty Brandley iyo Lindsay amaanay.
podcast ayaa laga heli karaa iTunes, Google Play iyo Stitcher oo ay wada hadlaan mawduucyo kala duwan xuddun u isticmaalka clickfunnels sida habka uu u sameeyo a beta bilaabay lagacna, ama ku kala duwan oo muhiim ah oo u dhexeeya xeeladaha bixiyeen kitaabkii Software Qarsoon (maanka khariidaynta, Majaajiloodeen, ilaa iyo wireframing).
Waxay sidoo kale bixiyaan tilmaamo ku saabsan sida loo sameeyo page a Opt-in si buuxda functional iyo xaddiga anshaxa looga baahan yahay inay si dhab ah loo abuuro software.
Ha ha la'aanta wizardry sireed, ama xaqiiqda ah in aadan haysan fikrad software adag aad STOP ka diiwaan tababar bilaash ah. (Waxaad tahay doonnida la mid ah sida qof kasta oo kale, oo ay wax ka qabato doonaa DHAMAAN in madaxa-on!)
Waxaad u badan tahay in la yaabanahay hadii ay $27 ku qaatay buugga Software Qarsoon waxaa qiimo leh maalgelinta.
Well, waxaa jira war wanaagsan haddii aadan dareensaneyn sida lacag la qarash gareeyo, waxaad ka heli kartaa buugga qarsoon software download adigoo booqanaya website Russell Brunson ee.
Sida uu si cad u sheegayaa qurbaan ugu weyn ee buugga waa si aan idiin tuso jidka loo abuuro iyo iibiyaan apps software adiga kuu gaar ah kartoo in jadwalka 90-maalmood ah, xataa haddii aadan wax fikrad ah hal sida loo maareeyo code ama meel aan ka bilaabo.
Waxa kale oo idin bara sida loo isticmaalo farsamooyinka si gacan ka ganacsiga ah ee hadda jira ay ku daray dakhliga soo noqnoqda iyo qiimaha gartay macaamiisha cusub.
Waxaad ka heli kartaa helitaanka info this by booqashada link this.
Tilmaamo Software weyn ee buugga The Secret si fudud u abuuri karaan xiriir ah oo kaliya lagu soo bandhigi karaa hal isla'egta a: qarsoon software dib u eegis – 500 fikradaha software matoor.
Waxaad naftaada ka heli doontaa la isticmaalayo tiro ka mid ah qalabka in aad lahayd xitaa leeyihiin fiirsaneysa ee la soo dhaafay si ha abuurka bilaa tarbiyad ah.
sabuurada cad waayo, curinta noqon doonaa wax caadi ah aad loogu talagalay.
maanka Dhismaha maps si ay u maareeyaan socodka fikradaha iyo sida ay la xiriiri karaan kaa caawin doona inaad la dhiso qaab wanaagsan habka fikirka aad.
mockup Wireframing aad fikrado kaa caawin doona inaad sawirtaa sida ay u la soo saari karaa oo marka waxaa fikrad’ ugu dambeyntii qaabeeya sida aad u rabto in aad, aad bilowdo horumarinta mashruuca.
Diiwaan FREE ah "Dhis iyo Launch Your Software Own Next In The 90 Days " tababarka
Filed Under: Software secrets Tagged With: qarsoon software dib u eegis - 500 fikradaha software matoor
Qarsoon software buugga – qarsoon software pdf ay bixiyaan Clickfunnels waa mid ka mid ah waxyaabaha badan oo ay ka buuxsamay xal kale la isticmaalayo dublad si ay lacag u sameeyaan.
Buugani xarumaha ay fiiro gaar ah oo ku saabsan sii daayo tiro ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka software tayo leh in la iibin karaa at premium a aqoon yar ee sireed.
Buuggan waxaa laga bixiyaa kharash aad u yar (kaliya $27) laakiin dabcan, waxa kaliya albaabka furitaanka inay maalgashi ah xataa weyn halkaas oo aad doonaa is qarsoon oo dhan ayaa shaaca ka qaaday.
Haddii aad u yaabsan haddii ay tani u shaqaysaa sida ugu fiican ee seminar kale iyo koorsooyinka ay bixiyaan shirkadda, waxa keliya ee aad u baahan tahay si ay u eegaan dib u eegista online, halkaas oo aad ka heli mahad badane heerka guusha ee dadka isticmaala-markii ugu horeysay ee alaabta.
Filed Under: Software secrets Tagged With: software secrets book - qarsoon software pdf
Tani waxay u muuqan doonaa sida pun ah ula kac ah, laakiin i aamini, ma ahan: ganacsi A web-ku salaysan hantida maguurtada ah u baahan yahay guriga weyn-raadinta.
Waxa ugu wanaagsan waa in ay jiraan wax badan oo clickfunnels arrimo hantida maguurtada heli karaa in loo waafajiyo kartaa wadaha ku xiran tahay nooca ganacsiga uu hogaaminaya.
Haddii wakiilka guryaha ee doonayo in uu ku lug macaamiisha raadinaya heshiis weyn, qiimeynta lacag la'aan ah had iyo jeer guriga ku soo dejin doonaa hilib doofaar ee foomka of raadad.
istaraatijiyad A oo diiradda saaraya kordhinta qiimaha guri wuxuu noqon karaa marin habaabin, laakiin haddii uu isticmaalo sida saxda ah, soo socda dhaqanka daacad ah, waxaa soo afjari karo bixinta natiijooyinka weyn loogu talogalay macaamiisha aan leeyihiin guryaha la goobaha weyn.
Filed Under: Clickfunnels Tagged With: clickfunnels arrimo hantida maguurtada
Haddii aad yaaban sida firfircoon waa suuqa clickfunnels template ah, waxa kaliya ee aad u baahan tahay in ay sameeyaan search web oo aad isla markiiba heli doontaa muuqaalka guud ee fursadaha template isla bixiyeen in dadka isticmaala meel kasta ku salaysan heerka guusha.
Ma aha oo kaliya in!
Inta badan muraajiceeyey kuwaas tegi doonaa talaabo dheeraad ah si loo hubiyo in aad soo qaado template ugu fiican ee ganacsigaaga ku salaysan qurbaan alaabta aad.
Tan iyo markii ay inta badan arrimo kuwan iman xirxiraan badan oo muuqaalada caadadii, aad had iyo jeer ka dhigi kara shaqeeyaan arrinta ma xagal ee ganacsiga.
awoodaan in ay ku xidhmaan dadka isticmaala aad shabakadaha bulshada ama bixiyaan CCS bedeley pop-baxay Waxaad noqon doontaa, wadaago widgets iyo bandhigaa firfircoon ee content.
Haddii aad ka yaabban oo ka mid ah waa albaab ugu fiican bixinta clickfunnels, goobta bixisaa jawaabo fudud in ay ka shaqeeyaan nidaamka integrations on ugu yaraan 15 oo ka mid ah hababka lacag bixinta ugu caansan isticmaalo online.
Waxaad tegi kartaa hababka caanka ah loo isticmaalo Apple iyo lacagta Android in si fudud loo heli karaa bogga ugu weyn oo laga heli karo in lagu isticmaalo isku dhafan oo karbaash.
Authorize.net sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa, laakiin waxaad u baahan doontaa a sheet VAR.
Braintree sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay curiyaan muhiimka ah ee gaarka loo leeyahay, waayo, isdhexgalka.
Guji bangiga waxaa laga heli karaa, laakiin waxaad u baahan doontaa tiro ka mid ah alaabta wax ka bangiga u dhigay ilaa albaab bixinta sida muhiimka ah bangiga Click API ah, furaha API Clerck, iyo ID iibiya.
goobaha sida Dealguardian, Easypaydirect, faleebo jilicsan, JV, Ontraport, Recurly, Paypal, iyo WarriorPlus waxay leeyihiin iyaga u gaar ah geedi socodka Mudanayaasha kartoo, laakiin waxay weyn leh barnaamijka shaqeeyaan.
Waxaad kor u dejinta ganacsigaaga web-ku saleysan oo aad u baahan tahay in dadka ay leeyihiin fursado si loogu bixiyo adeegyada aad.
Warka wanaagsani waa in aad awoodid tan iyo software ah taageertaa ugu yaraan 15 Albaabo bixinta kala duwan.
Ku darista Paypal waxaa ka sii yara murugsan maxaa yeelay, waxaad u baahan doontaa in la abuuro badhan aad webpage iyo shaqeeyaan tiro ka mid ah goobaha ka xisaabtaada iyo gudahood masaf in la abuuro xuduudaheedu ku haga aad foolxumo badan.
is dhexgalka wax karbaashana, waddadiisa fudud tan iyo markii aad kaliya u baahan tahay in la abuuro link is dhexgalka ka Clickfunnels akoonka aad wax karbaashana, oo magacaaga ganacsiga qotomiyey habka oggolaansho labada iyaga ka mid ah.
Ka dib markii in, aad doonaa in la sameeyo iyo macaamiisha yeelan doontaa go'aanka ah in aynu aad shaqaysato.
baadi: Content is protected !!